I-Holland | Uqeqesho kwi-Intanethi | Lawula ukuFunda kwakho ngokutyibilikayo
Iipeki kunye nokufa
Iindleko ezibalekayo eziphezulu
Iincwadana kunye neeFlaya
Ityala leziFundo kunye namaNqaku
Iifomu zesicelo se Quote
Ukwabelana ngolwazi lwethu
Ayisiyo isixhobo kuphela esibalulekileyo xa uthetha malunga neenkqubo zokwenziwa eziphezulu. Ukubaluleka kwabasebenzi abaqeqeshekileyo, abanobuchule nabanolwazi, amagcisa, abaphathi kunye nabaphathi kubalulekile.
I-Holland ineyona nkqubo indala yokuzinza kweesemina zobugcisa kunye nezifundo zoqeqesho kwishishini. Iingcali zethu zobugcisa zithetha ngeminyhadala kwihlabathi liphela kwaye siyazidla ukwamkela iindwendwe ezivela kumazwe amaninzi ukuya kwikomkhulu lethu lase-UK e-Nottingham. Nangona kunjalo, siyaqonda ubuso ngobuso ayisoloko inokwenzeka kwaye sonwabile sithi singakubonelela ngeendlela eziguqukayo zokuqinisekisa ukuba uyahlangabezana neemfuno zakho zoqeqesho ngendlela elula enokwenzeka.
Ukuba ufuna uqeqesho okanye ingcebiso nangayiphi na into yokusebenzisa ithebhulethi sikholelwa kwintsebenziswano nokwabelana ngolwazi lwethu ngendlela esebenzayo nefanelekileyo kwiimfuno zakho.
E-Holland, siyazingca ngokwabelana ngolwazi namava nawo onke amaqabane ethu kwihlabathi liphela. Sineendlela ezahlukeneyo zoqeqesho ezikhoyo ukuhambelana neeshedyuli ezixakekileyo kwaye sinokuqhuba uqeqesho nokuba kukwindawo yakho okanye kwiziko i-Hollands eNottingham, eNgilane. Nokuba yeyiphi na iimfuno zeshishini lakho, silungiselela uqeqesho olulungele wena.
Sinethiwekhi emhlabeni jikelele yee-arhente zasekhaya ezingaphezu kwama-40 ezixhaswe ngabaphathi bezobugcisa. Ngokudibeneyo, bandwendwela abathengi kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi jikelele rhoqo. Yonke le nto ixhaswe ziingcali zethu zineminyaka engaphezulu kolwazi oluhlanganisiweyo lolwazi kunye namava.
Kwimeko yokuveliswa kwethebhulethi yanamhlanje akusoloko kulula ukufumana ixesha lokudibana nobuso. Le ayongxaki, siqhuba inkqubo ebanzi yeewebhu kunye neentlanganiso zewebhu ukuze sikwazi ukuhambisa ulwazi lwethu kunye nobuchule ngokukunceda ngexesha kunye nendawo ekufaneleyo.
Lawula ukuFunda kwakho ngokutyibilikayo
Siyaqonda ukuba akusoloko kusenzeka ukukhulula abasebenzi abaphambili ukuba bathathe inxaxheba kuqeqesho ngalunye ngaxeshanye ngeentsuku ezithile, kungoko ke siphuhlise eyona nto ilungileyo… I Holland Online Training.
I Holland Online Training ikunika ukhetho olukhulu lwezixhobo zemithombo yeendaba ezininzi ukubonelela ngamava okufunda kwi-intanethi. Iikhosi zenziwe ngemixholo eyahlukeneyo, imizekeliso, iividiyo, imizobo kunye nemibuzo eqhubayo. Olu qeqesho luthatha indawo yokusebenzisa izixhobo ezivela kwi-I Holland yeminyaka engama-70 yamava kwaye siphuhlise uluhlu lweemodyuli zokuhlawula iimfuno zakho. Ukongeza, ezi zinokuhlelwa ngokweemfuno zenkampani nganye.
Iqonga lethu loqeqesho kwi-Intanethi lilungile kuye nawuphi na umlawuli, umphathi okanye umphathi ojongayo ukuphucula ulwazi lwabasebenzi kwiindawo zokusebenzisa izixhobo zecwecwe.
Inkqubo ye-hierarchical ithetha ukuba kukho uphicotho olupheleleyo kunye nokulandelelwa kophuhliso lwabasebenzi kunye nokuqinisekiswa. Isatifikethi soqeqesho sinokukhutshwa ukugqitywa kwekhosi nganye kunye nokulandela umkhondo ngokulula xa oku kufuneka kuhlaziywe Ulwakhiwo olunamacandelo lunokusetyenziswa kumasebe ohlukeneyo, iindima zomsebenzi, iisayithi kunye namazwe ngeenjongo zokuthelekisa.
Le nkqubo iyafikeleleka kusetyenziswa izixhobo ezahlukileyo, oko kuthetha ukuba akukho ndawo yoluqeqesho efunekayo kwaye inkqubo inokufikelela ekuhambeni kusetyenzwa okukhoyo kunye nabaphathi ngokufanayo.
Cofa apha ukufumana iikhosi zakho zasimahla namhlanje!
Ukubanakho ukunika ingxelo ngokupheleleyo, okt ukubuka umsebenzi kunye nenkqubela phambili yomfundi.
Inokwandiswa kubasebenzisi kwiindawo ezininzi.
Ubume boqeqesho lokuzoba ngobuchule.
Isiqinisekiso sokugqitywa kwekhosi.
Ifikeleleka kwiintlobo ngeentlobo zezixhobo kubandakanya ikhompyuter, ilaptop, ithebhulethi kunye nefowuni.
Ukukwazi ukufundisa rhoqo abasebenzi.
Abasebenzi abagunyazisiweyo banokulandela umkhondo apho abasebenzi babo kukwindlela yoqeqesho noqinisekiso.
Iyafumaneka kubasebenzisi abayi-1-1000 + kuzo zonke iisayithi ezahlukeneyo kunye / okanye amazwe.
Ukufikelela kukhetho lweekhosi ezixhomekeke kwinqanaba lezakhono.
Ukuvavanywa kwimodyuli nganye ibalaselisa apho uqeqesho ngakumbi okanye ukuqeqesha kufuneka khona
Ifumaneka kwizixhobo ezininzi ezinesikrini esifanelekileyo esibonisa ukuba akukho mfuneko yendawo yoqeqesho ezinikezelweyo. Ifanelekile kubasebenzi abahamba-hamba.
Ukuncitshiswa kweendleko zokuphuhliswa kwesifundo kunye nexesha.
Funda ngakumbi kwi-I-PHARMACARE® ye-7 Inyathelo le-I Holland
Fumana iindaba kunye neziganeko zamva nje e-I Holland
Jonga izifundo zethu zamva nje kunye neencwadana
Ngaba unemibuzo? Nxibelelana neqela lethu namhlanje
Umgaqo wabucala | © Ilungelo lokushicilela I Holland Ltd 2019
Indawo ngu I-Lowaire
Ngaba uyafuna i-Demo yeNkqubo yokuQeqeshelwa yasimahla kwi-Intanethi?
Faka iinkcukacha zakho apha ngezantsi ukuze ubonise uqeqesho lwakho simahla kwi-Intanethi